Solar Panel-saareyaasha, Shirkado Solar Panel Qalabka, Mono Solar Panel - Haitian
Our Ballanqaadka Real gaaray Beyond Diesel & Baansinka Engine
Ningbo tamarta la cusboonaysiin karo Haiti la aasaasay sannadkii 2001, waa mid ka mid ah soo saaraha ugu horeeysa ee qoraxda photo-voltaic oo taxane wax soo saarka la xiriira module qoraxda ee Shiinaha. Haiti ku hawlan R & D iyo wax soo saarka ee Silicon crystalline unugyada tamarta qoraxda iyo modules. poly-Silicon milicsiga kuwaas oo kala duwan oo ka mid ah 5 ilaa 300 W per guddi, milicsiga Mono-crystalline sidoo kale kala duwan ee per guddi 160-190W / 260-280W. Iyo waxyaabaha our, ayaa sidoo kale la timid CE, shahaadooyinka UL, TUV. Ka sokow, waxaan sidoo kale la qorsheeyo karo oo xal nidaamka hybrid dabayl-qoraxda haddii baahida loo qabo in qaar ka mid site gaar ah ...
dabayl Residential SWT5kw marawaxadaha
Caadiga ah module-CHNSW-220W-250W-60
System PV Solar Waayo, Residential
nidaamka PV Solar ka mid ah qaybaha kala duwan waa in lagu soo xulay si waafaqsan nooca nidaamka, goob goobta iyo codsiyada. Qaybaha waaweyn ee nidaamka PV qoraxda waa xakamaysada qoraxda lacag, inverter, bangiga batari, ilaha tamarta kaabayaal iyo naf dhibkeed (qalabka).
nidaamka tamarta cadceeda warshadaha iyo ganacsiga
nidaamka tamarta cadceeda warshadaha iyo ganacsiga ka kooban yahay cadceedda, xakamaysada ah nidaam iyo inverter. guddi Solar soo saari doonaa DC (Direct ee hadda) korontada, iyo korontada this la ordi doonaa in kastoo Converter iyo inverter in ay soo saaraan AC (talantaalli ah ee hadda) korontada. Markaas tamarta tani waxaa la kulanaa guddi awood AC dib xirneeyn awood shirkadaha korontada. Sida on-Roobka nidaamka tamarta cadceeda jecel yahay faa'iidooyinka beteri xor ah oo kharash yar ...
dabaylaha nidaamka hybrid qoraxda guriga
Sida laga soo xigtay khubaro badan oo tamarta la cusboonaysiin karo, "hybrid" nidaamka yar korontada in isku daraa dabaysha iyo (looxaanta) qoraxda teknoolajiyada bixisaa faaidooyin badan labada system.In hal badan meelaha, xawaaraha dabaysha waa yar yahay xagaaga laakiin qorraxdu goortay soo iftiimay ifka iyo dheer. Dabayshu waa xoog badan yahay ee xilliga qaboobaha marka qoraxda ka yar waa la heli karaa. Maxaa yeelay, meesha ugu sarreysa ee ka hawlgala jeer waayo, dabaysha iyo
Poland Plant 40KW PV NIDAAMKA
Shiinaha Shanghai Home PV NIDAAMKA
Ireland dabayl qoraxda NIDAAMKA ganacsi hybrid
System Koonfur Afrika 200kw Industrial PV
Bolivia dabayl qoraxda NIDAAMKA ganacsi hybrid